people Nepal » नेपाल र भारतबीच गठित प्रबुद्ध समूहको बैठकमा यस्ताे प्रस्ताव नेपाल र भारतबीच गठित प्रबुद्ध समूहको बैठकमा यस्ताे प्रस्ताव – people Nepal
नेपाल र भारतबीच गठित प्रबुद्ध समूहको बैठकमा यस्ताे प्रस्ताव
Posted on October 8, 2017 by Purna Nanda Joshi
२२ असोज, काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को बैठक सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौंमा शनिबार र आइतबार भएको पाँचौं बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न आयाम, यसअघि दुई देशबीच गरिएका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
यद्यपि, कुनै विषयमा पनि ठोस सहमति भने बनिनसकेको नेपाली पक्षका संयोजक डा. भेषबहादुर थापाले बताए । बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा नियमन ब्यवस्थित गर्न चेक प्वाइन्टहरुमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
बैठकमा सुरक्षा, जलस्रोत, द्विपक्षीय जनजीवनका बारेमा प्रशस्त छलफल भएको डा. थापाले जानकारी दिए । नेपाली पक्षले निकै जोड दिएको सन् १९५० को मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा भने यस पटक खासै धेरै छलफल भएन ।
अर्को बैठक आगामी नोभेम्वरको ११ र १२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा नेपालतर्फबाट संयोजक डा. भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरु नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई थिए भने भगतसिंह कोसियारीको नेतृत्वमा रहेको भारतीय पक्षको अरु सदस्यमा डा. बिसी उप्रेती र महेन्द्र पी लामा थिए ।